Zavatra 10 Nanjavona ny fahafahanao misafidy izay manohy manimba ny orinasanao | Martech Zone
Alahady, Septambra 19, 2010 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Omaly dia nahafaly ahy ny nanao atrikasa niaraka tamin'ny faritra Fikambanan'ny mpikabary nasionaly, tarihin'ny Karl Ahlrichs. Ho an'ireo mpandahateny ampahibemaso, zava-dehibe ny fisian'ny fisian'ny tranonkala lehibe ary ny ankamaroan'ny mpanatrika dia gaga nahita banga be tao amin'ny paikadin'izy ireo.
Ny ankamaroan'izany dia satria niova be ny indostria… ary ny ankamaroan'ny masoivoho dia tsy nitazona. Raha mametraka tranokala tsotra ianao dia toy ny manokatra magazay eo afovoan'ny tsy misy toerana. Mety ho tsara tarehy, nefa tsy hahazo mpanjifa izany. Ireto misy endri-javatra 10 tsy maintsy ampidirin'ny masoivohonao rehefa mampivelatra ny tranokalanao:
Content Management System - Mampihomehy ireo masoivoho mitazona ny mpanjifan'izy ireo intsony noho ny fanavaozana sy fanovana rehefa be dia be ny rafitra fitantanana atiny mahafinaritra. Ny rafitra fitantanana atiny dia ahafahanao manampy sy manitsy ny tranokalanao araka izay itiavanao azy, raha irinao. Ny masoivohonao dia tokony ho afaka mampihatra ny volavolanao manodidina ny motera misy ny rafitra fitantanana atiny matanjaka.
Search Engine Optimization - raha tsy takatry ny maso ivoho ny fototry ny fanatsarana ny motera fikarohana dia mila mitady masoivoho vaovao ianao. Toy ny fananganana tranokala tsy misy fototra io. Ny milina fikarohana no boky telefaona vaovao… raha tsy ao ianao dia aza manantena hahita olona mahita anao. Azoko atao ny manery ny hoe tokony ho afaka manampy anao amin'ny famantatra teny lakile kendrena mihitsy aza izy ireo.
Analytics - tokony hanana fahatakarana fototra momba ny Analytics ary ny fomba hahitana hoe inona ireo pejy ary inona ny atiny ifantohan'ny mpitsidika anao hahafahanao manatsara ny tranokalanao rehefa mandeha ny fotoana.
Bilaogy sy horonan-tsary - Ny bilaogy dia hanome ny orinasan-tserasera fampitana vaovao, hamaly ireo fanontaniana napetraka matetika ary hizara ny fahombiazanao amin'ireo olona andrandrainao sy ireo mpanjifanao ary koa hanome azy ireo fitaovana manaraka, amin'ny alàlan'ny famandrihana ary hifanakalozana ho valiny. Tokony ampahafantarina isaky ny pejy ny fahana nomenao. Hanampy iray taonina amin'ny tranokalanao ny horonantsary - manamaivana kokoa ny fanazavana ny hevitry ny sarotra izany ary manome fampidirana tsara ho an'ireo olona ao ambadiky ny orinasanao.
Contact Form - Tsy ny rehetra no te-handray ny telefaona ka hiantso anao, fa matetika izy ireo dia hanoratra anao amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana. Milamina ary tsotra. Tsy mila mandahatra an'io akory izy ireo… afaka mahazo kaonty anao fotsiny izy ireo mpanamboatra endrika an-tserasera,formstack , ary hitsangana ianao ary hihazakazaka!
Optimization finday - Tokony ho tsara amin'ny finday ny tranokalanao. Tsotra ny famolavolana CSS finday (styleheet) ahafahan'ny mpitsidika finday mizaha ny tranokalanao, mahita ny toerana misy anao, na tsindrio rohy iray hanaovana antso.
Twitter - Ny masoivohonao dia tokony hanangana mombamomba ny pejy Twitter-nao izay mifanaraka amin'ny marika amin'ny tranokalanao. Tokony hampifangaro ny bilaoginao koa izy ireo amin'ny alàlan'ny fitaovana toa ny Twitterfeed hamafana ho azy ny fanavaozana ny bilaoginao. Ny masoivohonao dia tokony hampiditra ny twitter amin'ny tranokalanao, na amin'ny alàlan'ny kisary sosialy tsotra na amin'ny fampisehoana ny hetsika farany nataonao tamin'ny tranokalanao.
Facebook - Tokony hampiditra ny marikao amin'ny pejy Facebook manokana koa ny maso ivoho ary hampiditra ny bilaoginao amin'ny alàlan'ny fampiasana naoty na Twitterfeed.
fiantsonana Pages - Ny Calls-To-Action voaomana tsara eo amin'ny tranokalanao dia hanome làlana mankany amin'ny fifandraisan'ny mpitsidika anao ary ny pejy fipetrahana dia hamadika azy ireo ho mpanjifa. Tokony hifanakalo hevitra aminao ny safidinao momba ny fomba hitarihana fitarihana amin'ny pejy rehetra ao amin'ny tranonkalanao - amin'ny alàlan'ny demo, whitepapers, endrika fampahalalana bebe kokoa, ebooks, fisintomana, fitsapana sns izay manangona ny mombamomba ny fifandraisana ho setrin'izany.
mailaka Marketing - Ireo mpitsidika ny tranonkalanao dia tsy vonona ny hividy foana… ny sasany amin'izy ireo dia mety te-hijanona mandritra ny fotoana fohy alohan'ny hanapahan-kevitra hividy. Gazety iray isan-kerinandro na isam-bolana izay miresaka momba ny fampahalalana mifandraika sy ara-potoana dia mety ho fikafika fotsiny. Ny masoivohonao dia tokony hanana anao hihazakazaka amin'ny mailaka marika miaraka amin'ny solid mpamatsy tolotra mailaka, toa an'i CircuPress. Ny atiny bilaoginao aza dia mety handefa mailaka isan'andro mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny rafitr'izy ireo ka tsy mila miditra akory!
Ny masoivoho sasany dia mety mihemotra amin'ny fanaovana ireo asa rehetra ireo na amin'ny tranokala… Tsy raharahako. Fotoana tokony hiarahan'izy ireo miaraka amin'ny mpanjifany ary takany fa tsy ampy ny fanosehana tranokala tsara tarehy fotsiny. Amin'izao fotoana izao, ny paikadinao dia mila mihoatra ny tranokalanao ary mampiditra media sosialy, fanatsarana ny motera fikarohana, ary paikadim-barotra miditra.
Sampan-draharaha misahana ny saina: Raha tsy manomana ny mpanjifanao ianao araraoty tanteraka ny tranonkala, maka vola fotsiny ianao amin'ny asa antsasaky ny boriky. Miankina aminao ny mpanjifanao amin'ny fananganana tranokala sy paikady ahazoana orinasa.
Tags: sampan-draharahafahafahana misafidyAnalyticsfitorahana bilaogyContact Formrafitra fitantanana atinymailaka MarketingFacebookpejy pejyfanatsarana findayfikarohana OptimizationTwittervideo marketingvlogging
Ny media sosialy no PR vaovao
Sep 20, 2010 amin'ny 8: 00 AM
Noheveriko fa manara-penitra daholo izao. Mampalahelo indrindra fa ny fikambanana sasany dia mbola tsy mampiasa rafitra fitantanana votoaty tena izy!
Sep 20, 2010 amin'ny 8: 06 AM
Manaiky Michael! Indrisy anefa fa mbola manana masoivoho roa isika izay miasa ao amin'ny toeram-ponenan'izy ireo ihany ary tsy mahazo ny fepetra takian'ny orinasa na ny fahafahana satria tsy maharaka ny fironana an-tserasera, fikarohana ary media sosialy. Ankoatra izany, ny orinasa sasany dia omena tsiny - ny orinasa sasany dia tsy mahatsapa ny mety ho azon'ny tetikady lehibe iray, ka mandeha miantsena amin'ny tranokala mora vidy izy ireo.
Sep 21, 2010 amin'ny 10: 24 AM
Ao anatin'ny banga dia misy dikany avokoa ireo toetra ireo, ary amin'ny maha-orinasa web dev no atolotray azy ireo ho an'ny mpanjifanay, ary mihoatra noho izany aza, toy ny fampiharana finday raha mifanaraka amin'ny maodelin'ny orinasany izany. Indrisy anefa fa misy orinasa mitady bilaogy na tsy maintsy mitantana ny tranokalany ho toy ny enta-mavesatra, ka maro no misafidy ny tsy handeha amin'ity lalana ity. Ny hevitr'izy ireo dia, maninona no tafintohina amin'ny fiezahana hampiditra sary vaovao ao amin'ny tranokalanay ary amboary tsara mandritra ny ora roa, rehefa afaka mandoa vola amin'ny mpamorona ahy mandritra ny 15 minitra aho.
Vao haingana ny namako iray no namokatra ny tranokalany manokana, ary rehefa nanontany azy aho hoe hafiriana izany, dia tsy azony antoka fa nandritra ny 100 ora mahery ny fikarohana, fiofanana momba ny WordPress sy ny fampiharana ary ny fampiharana indray — eny, raha mandika izany ianao. amin'ny tahan'ny isan'ora amin'ny maha-mpiofana manokana azy (eo amin'ny $90 eo ho eo), izay miampy vola tena izy.
Noho izany, na dia misy dikany aza ireo lafiny rehetra ireo, maro amin'ireo tompona orinasa, anisan'izany ny iray noresahiko androany, no mijery ny bilaogy sns ho toy ny asa hafa, ary ny iray dia tsy manam-potoana hanaovana azy isan'andro. Noho izany, raha asain'izy ireo manao ny asa ny mpamorona azy ary manaisotra izany amin'ny lisitry ny zavatra tokony hataony, tsy antsoiko hoe atao takalon'aina izany–antsoiko hoe fampiasana marani-tsaina ny fitantanana fotoana izany.
21 Septambra 2010 à 3:59
Manaiky tanteraka, Preston. Ny olana amiko dia ny masoivoho dia tsy miresaka akory ny fahafahan'ny mpanjifany mibilaogy sy manombatombana raha tetika mahomby io na tsia. Mampalahelo izany.
Sep 22, 2010 amin'ny 7: 18 AM
Eny, ny tsirairay amin'ireo teboka ireo dia tokony hodinihina sy hodinihana - fahadisoana lehibe ny manala ny fanolorana azy ireo. Indraindray dia toa te-hitalaho amin'ny mpanjifa aho mba hidina amin'ny lalan'ny SMM, saingy ny ankamaroan'ny orinasa sendra ahy dia mbola tsy te hikasika izany–raha misy olona tsy 'mivarotra' ny fampiharana ny serivisy dia mampiseho azy ireo izay mety ho vokatr'izany, hoy izy. ry sakaiza, moa liana izy ireo.
Heveriko fa hahita tombony amin'ity toe-karena ity aho, ny tsirairay amin'ireo teboka ireo dia tsy maintsy atao amin'ny orinasa ANY, saingy indrisy fa mbola misy orinasa any izay manana tranokalan'ny taranaka voalohany izay mitaraina momba ny pejy fidirana, antso ho amin'ny hetsika, ary bilaogy. ireo tompona orinasa dia miteny hoe “Tsy mahazo raharaham-barotra amin'ny Internet aho.” Eny ary, lol, tsy mahagaga… 😉